कांग्रेसलाई नेकपाको जवाफ- नेपालले आफ्नो खुट्टामा आफै‌ हिँड्न खोज्दा किन आपत्ति ? (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
कांग्रेसलाई नेकपाको जवाफ- नेपालले आफ्नो खुट्टामा आफै‌ हिँड्न खोज्दा किन आपत्ति ? (भिडियो)
काठमाडाैं, ९ असार । सत्तारुढ नेकपाका सांसद वेदुराम भुसालले नेपालले स्वतन्त्र निर्णय गर्न खोज्दा किन भारतबाट टाढ गर्न खोजिएको भनेर प्रश्न गरिने गरेको बताउनुभएकाे छ । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा भुसालले साे कुरा बताउनुभएकाे हाे ।
संविधान निर्माणका बेलाको र नाकाबन्दीको बेलाकै जस्तो नागरिकता विधेयकमा पनि कुरा उठाइएको भुसालले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘चीन जोड्ने कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने बेला, संविधान निर्माणका बेलाको र नाकाबन्दीको बेलाकै जस्तो नागरिकता विधेयकमा पनि कुरा उठाइएको छ ‘
नेपालले आफ्नो खुट्टामा आफै‌ हिँड्न खोज्दा किन आपत्ति भनेर प्रश्न पनि गर्नुभयाे । ‘नेपालले स्वतन्त्र ढंगले जब निर्णय गर्छ किन भारतबाट टाढा गर्न खोजिएको भनिन्छ ? के भारतको चंगुलमा राखिरहनुपर्छ भनिरहेको हो ? राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ भनिएको छ, के भारतको छोटे भाइ भइरहेन भनेर हो ? नेपालले आफ्नो खुट्टामा आफै‌ हिँड्न खोज्दा किन आपत्ति हो ?’ उहाँकाे प्रश्न थियाे ।
आइतबार बसेकाे बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा ७ वर्षको समय सीमा लगाउने निर्णय असंवैधानिक भएको, नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको आधार भत्काउने, नेपाललाई चीनको झोलामा राख्ने लगायतका प्रतिगामी काम भएको आरोप लगाउनुभएकाे थियाे ।